AlQAACIDA oo ku baaqday in loo aargudo Sheekh Cumar Cabdi Raxmaan. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Feb 19, 2017 270 0
Faracyada Alqaacida ee Jaziiradda carabta iyo Maqribul Islaam ayaa soo saaray bayaan taczi ah oo ku saabsan geerida Sheekha caalimka ahaa ee Dr Cumar Cabdi Raxmaan Raximahullaah.
Bayaankan oo ku qoran luuqadda Carabiga islamarkaana si wadaji ah uga soo baxay mu’assasaadka Andalus iyo Al-Malaaxim ayaa umadda islaamka siday u dhantahay gaar ahaan ahalka Sheekha waxaa looga tacziyeeyay geeridii naxdinta badneyd ee dhawaan ku timid Sheekh Cumar Cabdi Raxmaan oo ku xirnaa xabsiyada dulmiga badan ee dowladda Maraykanka.
Waxaa bayaanka lagu sheegay in jaraa’imta dowladda Maraykanka ay ka gashay Muslimiinta ay ku darsatay midkan ugu dambeeya ee ah in caalimka rabaaniga ah sheekh Cumar uu ku shahiiday gudaha xabsiyadeeda, isagoo u xirnaa rubac qarni.
Waxaa bayaanka lagu amaanay sugnaanta iyo adkeysiga uu sheekha la yimid fatradaas dheer ee uu ku jiray gacanta dowladda Maraykanka, waxaana Mujaahidiintu ku tilmaameen inuu yahay libaaxii Cilmiga iyo Jihaadka, iyadoona uu intaas ku daray bayaanka in Sheekhu ahaa qof looga dayado Nafhurka, samirka, isagoona manaarad dheer oo ifeysa u taagay umadda Islamaka si ay u ifsato Inshaa’Allaah.
Amaan loo soo jeediyay Sheekha iyo sheegida mawaaqiftiisa taariikhiga ahaa kadib, waxay faracyada Alqaacida ee Jaziiratul Carab iyo Maqribul Islaam ay u tacziyeeyeen umadda Islaamka.
“waxaan uga tacziyeyneynaa nafteena, umadeena guud ahaan si gaar ah ahalka Sheekha musiibadan weyn, Qalbiguna wuu murugoonayaa, ishuna way ilmeyneysaa, mana dhahayno wax Alle raalli geliya mooyee, Innaa Lillaahi Wa inaa Ilayhi Raajicuun, Ilaahow musiibadeena naga Ajar sii nooguna bedel wax ka kheyr badan” ayaa lagu yiri bayaankan taczida ee sida wadajirka ah uga soo baxay labo farac oo kamid ah faracyda ugu weyn ee Qaacidatul Jihaad.
Ugu dameyn waxaa dhamaadka Bayaankan fariin loogu diray guud ahaan Islaamka, waxaana loogu baaqay iney u aargudaan Sheekha, islamarkaana haddii ay awoodi waayeen iney kasoo saaraan xabsiga uu ku jiray ay ka aargutaan dadkii sababay geeridiisa.
“ waxaan ugu baaqeynaa wiilasha Islaamka, iyo farda fuulladiisa sharafta badan, haddii aydaan ku guuleysan inaad Sheekha kasoo saartaan xabsiga, waa inaad ku dadaashaan fulinta iyo ka dhabeynta dardaarankiisa, waana waxa ugu yar ee ay keensaneyso walaaltinimada Islaamka” ayaa lagu yiri bayaankan kasoo baxay Alqaacidada Jaziiradda Carabta iyo Maqribul Islaam.
Maalintii sabtida ayaa la shaaciyay geerida sheekha caalimka caabidka Dr Cumar Cabdi-Raxmaan, kaas oo tan iyo sanadkii 1993 ku jiray xabsiyada dowladda Maraykanka, waxaana sheekha uu la kulmayay tacadiyaad iyo tacdbiib daran oo uga imaanayay ilaalada Xabsiga.
Waxa socoda dadaallo lagu doonayo in meydka Sheekha lagu keeno dalka Masar, islamarkaana lagu aaso, taas oo ahayd dar-daaranka sheekha balse lama oga sida ay ku suura geli karto, iyadoo dowladda Masar ay ka meermeereyso in dowladda Maraykanka ay arinkaas ka codsato.